March 24, 2018 – Simple Khabar
निद्रा लाग्दैन मस्त निदाउन के गर्ने ?
On March 24, 2018 By simplekhabar
डिनरमा हेभी खाना खाने गर्नुभएको छ र पेट डम्म हुनेगरी अघाउँजी खाने बानी बसाल्नुभएको छ भने आजैदेखि बानी सुधार्नुस् । तरकारी, दाल, फलफूल, सलाद, दूधजस्ता हलुका खाना उपयुक्त मानिन्छन्, जसले मीठो निद्रा लगाउन मद्दत पुर्‍याउँछन् […]
टिप्सLeaveacomment
गाईको मासु बिक्री गर्ने ११ जनाले पाय नेपालकै यति ठुलो सजाय ! [सेयर गर्न नभुल्नुहोला ]
गाईको मासु बिक्री गर्ने ११ जनाले पाय नेपालकै यति ठुलो सजाय ! [सेयर गर्न नभुल्नुहोला ] काठमाडौं : भारतको झारखण्ड राज्यको एक अदालतले गाईको मासु बिक्री गर्ने ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । गाईको […]
बाबुलाई ताकी ताकी छोराले हाने खुकुरी, खुकुरी प्रहारबाट गम्भिर घाइते बाबुलाई हेलीकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइयो ओखलढुगा । घरायसी विवादमा छोराले बाबुलाई खुकुरी हानेपछि बाबु गम्भिर भएका छन् । घटना हो ओखलढुगांको । ओखलढुगांको सिजिदेम्बा गाउँपालिका–४ मा […]
२ वर्षमा रेल कुद्छ, नेपालको पानीजहाजले मान्छे ओसार्छः प्रधानमन्त्री ओलीकै आवाजमा (अडियो सहित)
On March 24, 2018 March 24, 2018 By simplekhabar
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र रेल सेवा संचालनमा ल्याउने दाबी गरेका छन् । रेलसँगै नेपालको पानी जहाज चलाएर आफ्नो मजाक उडाउनेहरुलाई जवाफ दिने उनले बताए । शुक्रबार काठमाडौंमा २९ औं राष्ट्रिय औद्योगिक […]
शेरबहादुर देउवामाथि कांग्रेसका नेता को पक्ष र कस्ले लगाउदैछन् आरोप
काठमाडौं १०,चैत। चुनावी हारको समिक्षामा जुटेका कांग्रेसका नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आरोपै आरोप लगाएका छन् । देउवा पक्षका नेताहरुले भने नेतृत्वको बचाउ गर्दै किसुनजी […]
रोल्पालाई यसरि सम्झन्छन प्रचण्ड विश्वव्यापी पहिचान बनाएको छ ।
चैत १०,काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले क्रान्तिको नयाँ अवसर प्राप्त भएकाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पार्टीको अभियानमा सहयोग पुर्याउन आह्वान गरेका छन् । रोल्पा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सम्मान […]
श्रीमतीलाई रुखमा बाँधेर कुटपिट !
श्रीमतीलाई रुखमा बाँधेर कुटपिट एजेन्‍सी-भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बुलन्द शहरको एक गाउँ लौगामा एक महिलालाई रुखमा बाधेर पतिले कुटपिट गरेका छन्। श्रीमतिमाथि परिवार र पतिले शंकाकै भरमा गाउलेको सामू श्रीमतिलाई रुखमा बाँधेर कुटपिट गरेकको बीबीसीले जनाएको […]
६ सय जनालाई रोजगारी :जनप्रतिनिधिले अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय
जनप्रतिनिधिले अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने चैत १०, २०७४ पर्वत : महाशीला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले न्युनतम तीन र वडा सदस्यले पाँच दिन श्रमदान गर्नुपर्नेछ। […]
Banner News प्रदेश ४Leaveacomment
हेर्नुहोस यो ठाउँमा दलितलाई हेर्ने नजर अझै फेरिएको छैन
खप्तड छान्ना गाउँपालिका ६, पाटादेवलकी जानकी नेपाली फागुन दोस्रो सातातिर गाउँनजिकै गैरा भन्ने ठाउँको पाखोबारीमा घाँस काट्दै थिइन् । आफ्नो बारी नजिकैको बाटोमा किन घाँस काटेको भनेर स्थानीय थापा थरकी एक महिलाले उनलाई तुच्छ शब्दसहित होच्याउँदै […]